Khipha ku-internet SPC zaphansi High Vinyl Plank zaphansi Umkhiqizi kanye Factory | U-Iverson
I-SPC Flooring Ikhwalithi ephezulu yeVinyl Plank
I-SPC Floor ingumkhiqizo wobuchwepheshe nokuhlakanipha. Inikeza ukuhlanganiswa kwezendlalelo eziningi, indawo yokumboza, ubumsulwa obuphezulu obusobala be-pvc yokugqoka, ifilimu ephrintiwe ephezulu, umgogodla we-SPC nephedi eyisimungulu. I-SPC imele i-'plastic plastic composite 'noma' stone polymer composite '. Ngokuqondile, i-limestone, eyinhlanganisela engaphili. Kuthatha ama-50-70% wokuqukethwe kwaphansi. Okunye yi-PVC ne-stabilizer. Vele isilinganiso sinqunywa yimenenja yokukhiqiza ngayinye eyenza umehluko omkhulu kwikhwalithi.
Ukwehliswa kwe-SPC empeleni kubhekwa njengezinto zaphansi ezinamazinga aphezulu emakethe. Yize amapulangwe mancane kakhulu, anokuphikiswa okukhulu nokuqina. Ikhwalithi enhle kakhulu yesendlalelo sokugqoka iyenza ingavumi ukugqoka, okuchaza ukusetshenziswa kwayo okubanzi endaweni yezentengiso nasezindaweni zethrafikhi ephezulu. Ngaphandle kwalokho, ukumbozwa kwayo kwe-UV kwenza indawo ingamazisi lapho ilungele kakhulu abantu abanezilwane ezifuywayo ezinkulu. Ukwehliswa kwe-SPC kunokuminyana okuphezulu, lezi zici zikwenza kube okuqinile kakhulu.
Ngenxa yokungenwa ngamanzi ayi-100%, amanzi ngeke enze ukuvuvukala phansi, ukuqhuma noma ukucwebezela. Kusho okuthile. Ngenxa yalobu buhle obuvelele, abantu basebenzisa i-spc flooring ngokwengeziwe emakhishini abo nasezindlini zangasese. Ukumbozwa okukhethekile futhi kwenza ukuthi phansi kushibilike ngenkathi kuhlangana amanzi. Nomaphi lapho amanzi angaba yinkinga, i-spc floor iyindlela enhle. Izindawo zokudlela kanye namahhotela imvamisa amabhizinisi amabili ajwayelekile ukusebenzisa i-SPC flooring. Ukudwetshwa nakho kuyindlela yokugcina induduzo yonyawo nokulawula umsindo.
Uma ubheka ukulungisa kabusha i-flooring yekhaya lakho, cabanga nge-SPC flooring. Okokugcina, simane nje singumkhiqizi waphansi we-SPC nomhlinzeki ochwepheshe ongakusiza ukonga isikhathi nemali yakho. Sithanda ukuba umphakeli wakho wesipele, ngithinte ngamasampula wamahhala nezintengo eziqonde ngqo embonini Ukuze uthole ikhotheshini.
Langaphambilini I-SPC Flooring Ngesandla Esiqinile I-Core Vinyl Flooring
Olandelayo: SPC zaphansi Chofoza ehlanganisiwe With Ixpe Esekelwa
4mm Spc zaphansi
Zangaphakathi Spc zaphansi
SPC zaphansi 4mm
SPC zaphansi 4mm Manzi
SPC zaphansi 8mm 4mm
Vinyl Spc zaphansi
I-LVT Floor 3d Floor Stickers IVinyl Plank
SPC zaphansi Ngesandla Esiqinile Core kuncike Chofoza Loc ...
Inani Elishibhile Elingenamlilo IVinyl Chofoza ku-SPC
SPC zaphansi 4mm Manzi IVinyl Floor
WPC zaphansi PVC Engineered Plastic Izinkuni zaphansi
IVinyl flooring Luxury PVC ipulangwe lvt flooring
IKHELI No.6 XinYuan Road JiangYin Idolobha, Isifundazwe JiangSu, China
Ucingo 0086 15251582621